Kube ngumvuka wendulo ukuboshwa kweNkosi – Bayede News
Yize iboshelwe okwehlukile umthelela wokungabibikho kweNkosana
Posted on 22/01/2016 04/09/2017 by bayede
Yize iboshelwe okwehlukile umthelela wokungabibikho kweNkosana yesizwe uyefana nasendulo
ESINYE zezikhali zikahulumeni wamakoloni ngesikhathi ilwisana nobukhosi kwakuwukubopha noma ukudingisa amakhosi. Lesi sikhali sasebenza kakhulu kubeNguni ngoba lesi senzo sasingagcini nje kuphela ngokuhlukumeza osesihlalweni kepha sasihlukumeza iNdlunkulu kanye nesizwe jikelele. Kungalesi sizathu ukuboshwa kweKumkani yabaThembu , uDalidyebo kuvuse indulo. Yize iKumkani iboshelwe okwehlukile kunamakhosi angaphambilini ukuxokozela esizweni sabaThembu kufana ncamashi nalokho okwakwenzeka endulo nxa inhloko yekhaya, inkosana yesizwe iboshiwe noma idingisiwe.
Kwaba njalo ngalesi sikhathi kuboshwa iqhawe lakwaXhosa uMaqoma ngonyaka 1859 emuva kwezehlakalo zikaNongqawuse. Kusuka ngoNcwaba we-1856 kuya kuNhlolanja we-1857 umlando uthi uMaqoma waboshela esiqhingini saseRobben Island kabili, okokuqala enomkakhe umama uKatyi. Lapha isigwebo sasiyiminyaka engama-20. Bakhululwa ngonyaka we- 1869. Nokho ijele labuye lamlandela ngoba wabuyiselwa khona esiqhingini ngowe-1871. Enye inkosi eyagqunywa eRobben Island kwaba nguLangalibalele wamaHlubi nowaboshwa ngonyala we-1874 nokwathi ngonyaka we-1884 wabe eseboshelwa endlini, ngeshwa wabe esekhothama ngonyaka we-1889.
KwaZulu nakhona isandla sonya lombuso wamakoloni sathatha iZingonyama sazisa ejele. Lapha abelumbi babefungile ukuthi akuyobuye kubekhona endlini kaSenzangakhona. Eqhulwini kwaba yiNgonyama uCetswayo kaMpande waboshwa mhla zi-31 kuNcwaba we-1879 emuva kwempi yasoNdini ngalowo nyaka. Ukuboshwa kweSilo sasoNdini kwaletha ubunzima kuZulu kwiNdlunkulu nasesizweni ngoba lapho abelumbi babe sebengena ngenxeba besebenzisa isikhathi uZulu engenayo inkosana yakhe. Kwabanjalo nokuboshwa kwendodana yaso, iSILO sasoSuthu ngowe-1888 okwabe kungokokuqala. Lapha Ingonyama uDinuzulu yaboshelwa esiqhingini sase St Helena. Emlandweni kaZulu cishe kayikho inkosi eyake yathwala ubunzima njengoMamonga ngoba yaze yadingiswa ezweni layo nokwayenza yakhothamela ngaphandle kwemigcele yelakwaZulu kwaThengisangaye ngomhla zili-18 kuMfumfu ngowe-1913.
Lezi ziwombe nezinye eziningi zazihlose ukuqeda ngaboHlanga. Kungalesi sizathu kukhona abamangele, kubalwa nayo iKumkani yabaThembu nxa ngaphansi kukahulumeni wentando yeningi iNkosana yabaThembu ifakwa ejele. Yize kuvela ukuthi abameli bayo benza amaphutha amaningi kuleli cala, isibonelo ukungahambi ngomgudu wesiko zisasuka nje , okunye okugqamile wukuthula kohlaka olumele amakhosi kuzwelonke ngalolu daba.
Yize inhlangano yeContralesa iphawulile ikwenze lokho amanzi esevele echithekile . UNobhala jikelele weContralesa uVelile Ndevu uphawule wathi: “UKumkane ubesanda kubuye ekudingisweni, obekusaphithaniswe amakhanda isizwe. Sengathi nomthetho bekufanele ukubhekelele lokho njengoba nabantu bebesanyakaziswa yilesi simo.”
Ukukwebhana osekubikwa emndeni kuyizinkomba zokuthi nembala abaThembu bazimuke amahanda, nokuyinto ezothatha isikhathi ukuthi ilungiseke.
Posted in Khumbula Zulu